Semalt: 3 Stratezia mba hampitsaharana ny fanimbana sy hanamafisana ny fahombiazanao
Maro ny tetika ampiasain'ny olona mba hahalalany ny votoaty an-tserasera. Misy ireo izay mino fa ny hany fomba ahafahan'izy ireo mahazo ny mpihaino hifantoka aminy dia ny manapaka tsy tapaka azy ireo. Ny ankamaroan'ny spammers dia matetika manana saina toy izany. Mindrana izany avy amin'ireo mpivarotra sy dokam-barotra nampiasaina nandritra ny am-polony taona maro izao. Nanao fahitalavitra be dia be izy ireo tamin'ny fotoana nandrenesana ny fahitalavitra, ary ny habakin'ny gazetiboky, olona iray no nahita azy ireo tamin'ny farany. Ny tetikady dia manana hadisoana iray:
Tsy miasa intsony izany
Tsy misy olona te hampahory ny zavatra tsy nangatahiny na ny hafatra tsy misy dikany. Ny tombontsoa sarobidy ananan'ny olona eto amin'ity tontolo be atao ity dia ny fotoana. Na izany aza, maro ireo mpitoraka blaogy, mpanoratra, ary dokam-barotra izay mbola manandrana manamarika amin'ny fampiasana ity paikady fiatoana ity isan'andro. Ho azy ireo, ny hany fomba handrenesan'ny olona dia raha manohy miteny izy ireo. Eny ary, misy ny hevi-dehibe avo tsy ho azony, ary raha anisan'ireo manana tetik'ady toy izany ianao dia tokony hajanona. Tena manorisory antsika amin'ny sisa rehetra izany.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt , dia manantena fa ny fomba tsara kokoa hahatsikaritra dia ny hampitsahatra ny tabataba sy hanangana sehatra izay hahasarika ny sain'ny olona.
Zavatra telo tokony henoinao
Ny "Marketing Marketing", nataon'i Seth Gordon dia boky iray izay miresaka momba ireo singa manan-danja telo ireo izay tokony tokony hamakiana ny hafatra tokony hovakiana: ny fanandramana, ny maha-zava-dehibe ary ny fomba manokana. Ny mpanome hevitra tsirairay dia maniry hanana mpihetraketraka ho babo. Na izany aza, ny hany fomba ahafantarana raha mahavariana ny zavatra atolotrareo dia raha avelany hanolotra izany ianareo. Ny zava-drehetra amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny alàlana. Ohatra, zavatra mahazatra toy ny fanoratana amin'ny serivisy, fanamafisana ny fonosana, na manantena daty iray amin'ny olona iray, dia manana zavatra iray izay eritreretinao hatramin'ny namelanao olona iray hampita ilay hafatra aminao.
Ny zava-dehibe dia zava-dehibe koa satria io dia mampiseho ny habetsaharinao amin'ny hafatra manokana. Raha tsy miraharaha ny votoatiny ny mpanatrika, dia tsy mampaninona izay mety hitranga. Tsy te hihaino azy ireo ny olona. Mitovy ihany koa ireo hafatra izay heveriny fa tsy misy dikany amin'izy ireo na ireo izay tsy manao azy ireo amin'ny sehatra samihafa.
Tokony ho hafahafa kely ianao
Miaina fifaninanana sy tabataba izao tontolo izao amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny rehetra te hahatsikaritra na mandre. Izany dia midika fa mety hiteraka fahatsapana amin'ny ankapobeny ianao raha toa ka tsy mampifanaraka ny votoatinao ho an'ny tsena manokana. Tsy liana amin'ny "ara-dalàna" intsony ny olona. Ny olon-drehetra dia maniry zavatra avy amin'ny olon-tsotra, zavatra "hafahafa"..
Blôgy, na karazana sehatra hafa, dia ahafahanao manatanteraka ireo zavatra telo resahina ato amin'ity lahatsoratra ity. Omeo fomba iray handefasana olona ny olona, ​​manome hafatra mifandray, ary mampiasa fomba tsy manam-paharoa.
Ny olona dia tokony hahatakatra fa ny fananganana sehatra toy izany dia mety mitaky fotoana sy fahazoan-dàlana betsaka. Saingy tsy vita izany hevitra izany. Mila ezaka kely fotsiny izy io.
Zavatra momba ny fahazoan-dàlana
Ity misy lisitr'ireo dingana efatra tsotra izay azonao ampiasaina hananganana fantsona iray izay hikarakarana ny olona sy hisalasala ny sainy:
1. Atsaharo ny fakam-panahy hanapaka. Anisan'izany ny fiezahana hihiaka, hikiakiaka na hangatahana hihaino. Ny fomba iray dia amin'ny alàlan'ny fampiasana spam bots mba hamerimberenana hafatra hafatra amin'ny spam miaraka amin'ny fanantenana fa ilay mpampiasa dia miantso amin'ny rohy nomena izay mitodika amin'ny pejin'ny mpandefa.
2. Manomboka amin'ny zavatra fantatrao. Na inona na inona tianao atao, ampiasao izany mba hananganana ny fototry ny sehatra, ary ho fitaovana hizaranao ny fahaizanao.
3. Omeo fahafahana hihaino ny olona. Raha toa ka tsy manana safidy ianao rehefa misarika ny sain'ny olona iray, ataovy amin'ny fo tokoa, ary amin'ny fanajana tanteraka.
4. Atsipazo amin'ireo mpihaino ny zavatra miavaka. Raha misarika ny sain'ny olona ianao dia aza miala amin'izany. Asehoy ny talentanao, ary raha azonao atao, dia andrahoy ny fepetra ary manoatra noho izay antenainy.
Mazava ho azy, azonao atao ny manararaotra ireo toro-hevitra ireo ary manetsiketsika ny tananao amin'ny rivotra manantena fa hisy olona hitantara. Mety hisy olona vitsivitsy hanongilan-tsofina aminao mihitsy aza. Ny olana dia ny fotoana hahitan'izy ireo zavatra mampivarahontsana kokoa noho ianao, dia hohadinoin'izy ireo ny zavatra tokony atolotrao.
Tadidio foana fa ny fomba handresenao ny mpihaino dia ny fomba tokony hitazonana izany. Raha toa ka amin'ny alalan'ny fampiatoana dia tsy maintsy manapaka ny mpihaino izany raha mbola misy zavatra azonao atolotra, ary ianao, na ny mpijery dia tsy mila izany.
Ny fomba tokana ahafahanao mahasarika ny mombamomba anao dia raha mahazo izany ianao. Asehoy azy, mangataha alalana, ary manafaka. Ny teknika rehetra amin'izao fotoana izao dia mahamenatra ary tsy hiraharaha izany amin'ny farany Source .